Android 12: ụbọchị mmalite na ekwentị ga -enwe ya | Androidsis
nkpagbu | | Noticias
Ọ dị ka ụbọchị amala nke Google ga -egosi ụdị gam akporo ọhụrụ ya bụ Android gam akporo 12. Nnukwu ịntanetị nwere n'uche nke na-esote Ọktọba 4. Na enwere ọtụtụ ndị na -amalite iche maka ekwentị ndị ga -enwe ya. Kedu ngwaọrụ ga -enwe gam akporo 12?
Dịka iwu n'ozuzu, ụdị ọhụrụ nke sistemụ mkpanaka nke Google na -ewepụta kwa afọ na -arụ ọrụ na ngwaọrụ ndị ewepụtara na mbụ. N'ezie, ọ ga -adị iche dabere na oke:
Na mobiles nke etiti ma ọ bụ obere nso, ngwaọrụ ndị ga -enwe OS ọhụrụ (sistemụ arụmọrụ) na -enwekarị ruo afọ 2
Na mobiles nke elu ma ọ bụ oke ala, oge na -eto ruo iru nke smartphones Afọ 3 na 4 nke ị ga -enwe ike ịnwe ụdị ọ bụla nke gam akporo nke na -apụta n'ahịa
N'iburu nke a n'uche, Android 12 ga-agbakwunyere, n'ụkpụrụ, n'etiti etiti ma ọ bụ ekwentị dị ala nke njedebe 2019 na 2020; mgbe ọ nọ n'ọkwa dị elu ma ọ bụ nke adịchaghị mma, ọ ga-abụ ndị gara ahịa na 2017/18. Oleekwa ndị ha bụ?
Ọ bụ eziokwu na nke a na -adị maka ụlọ ọrụ mkpanaka ọ bụla, mana ụfọdụ na -akụrịrị. Kedu ka ọ ga -esi bụrụ nke ọzọ, akara nwa ebu n'afọ Google ekwenyelarị nke ahụ ụdị nke ga -adaba na gam akporo 12 ga -abụ nke ka Pixel 3, n'ime ha bụ Google Pixel 3, 3XL, 4, 4XL, 4a, 4a (5G) na 5.
Na Samsung, smartphones dị elu dị ka Galaxy Note 20 na Galaxy S21. N'ime OPPO, Ụdị Find Find 3 yiri ka ọ bụ otu n'ime ndị nwere ọtụtụ ntuli aka ịnata gam akporo 12, ma ihe bụ isi ya na Pro. N'aka nke ya, n'ime OnePlus, Otu Plus Nord.
Firmlọ ọrụ China Xiaomi nwekwara ekwentị mkpanaka nke ga -emesị tinye gam akporo 12, otu n'ime ha ga -abụ Xiaomi Mi 11 na ụfọdụ Redmi 9.
Ugbu a, ọ ka ga -amata ma ị nwere ngwaọrụ ọ bụla na listi dakọtara na ụdị Android 12; Ma ọ bụrụ na nke ahụ abụghị ikpe, ị nwere nhọrọ abụọ: gaa n'ihu na ụdị gam akporo nke etinyerela ugbu a na ngwaọrụ gị ma ọ bụ zụta ọdụ ụgbọ ala emegharịrị na ya.
Na ngwụcha, ekwentị ọhụrụ na -atọ ụtọ oge niile ọ bụghị naanị n'ihi eziokwu na -agbanwe ya, kamakwa n'ihi na enwere ike ịnweta ohere ịchekwa, ngwaọrụ ndị ọzọ iji na, n'ezie, batrị ga -adịte aka.
Akụkụ ndị a niile dị mma ruo mgbe anyị chere maka ya nyefee data niile site n'otu ekwentị gaa na nke ọzọ. Agbanyeghị, nke a dị mfe karịa ka ọ na -ada. Ọ bụ naanị ihe dị mkpa ịmara ụdị ngwaọrụ ị nwere, ya bụ, ma ọ bụrụ na ọ bụ ama ma ọ bụ nke nkịtị. Dabere na nke a, usoro a ga -abụ otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ. Site ebe a gaa n'ihu, ihe fọdụrụ bụ ịnụ ụtọ ekwentị ọhụrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Android 12: ụbọchị mwepụta na ekwentị mkpanaka ga -enwe ya
Otu esi etinye "ñ" na keyboard gam akporo